မြန်မာ့မဟာဂီတ | မဟာဂီတမြတ်နိုးသူများအတွက်
ထူးမခြားနား January 11, 2012
Posted by myanmarclassical in တင်တင်မြ, သီချင်းခန့်များ, အဆိုတော် (မ).
Tags: တင်တင်မြ, သီချင်းခံ
မဟာဂီတချစ်သူများ မင်္ဂလာပါ။ မြန်မာတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အစစ် မဟာဂီတကို မပျောက်ပျက် ထိန်းသိမ်း ဖို့မြန်မာ တိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ မဟာဂီတ အလှအပကို လူတိုင်းခံစား စေချင်တဲ့ အတွက် ဒီဆိုဒ်ကလေးကို ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ Bloger မဟုတ်တဲ့အတွက် မကျွမ်းကျင်ပါ။ ကြိုးစားပြီးတင်ထားတာပါ။ ပြီးပြည့်စုံဖို့ ကြိုးစားပေးပါ့မယ်။ အားလုံးလဲ ဝိုင်းအကြံ ပေးကြပါ။
myanmar.classical@gmail.com ကိုအကြံညဏ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဖွင့်ဘုရားရှိခိုး အနေနဲ့ထူးမခြားနားသီချင်းခန့်နဲ့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ ထူးမခြားနားကတော့ သီချင်းခံအမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး မြဝတီမင်းကြီးဦးစရေးစပ် ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုတော်ကြီးတင်တင်မြ ရဲ့အေးမြသော အသံနဲ့အတူအလင်္ကာကျော်စွာ စောင်းဦးဘသန်း၊ ဆိုင်းစိန်ဗိုတင့် တို့ရဲ့လက်သံသာများကို နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။နိဒါန်းမင်္ဂလာလူးတား နဲ့ခြေဆင်းခင်းထားပါတယ်။
ဒီသီချင်း နဲ့ပတ်သက်ပြီး comment များလဲပေးနိူင်ပါတယ်။
စိန်ခြယ်ဖြာရောင်လင်း October 31, 2012
Posted by myanmarclassical in ထား, မူဟန်သွယ်သွယ်, သုမောင်, ကြိုးသီချင်းများ.
Tags: ဂီတနန္ဒဝန်, စိန်ခြယ်ဖြာရောင်လင်း, ထား, မူဟန်သွယ်သွယ်, သုမောင်, မြကျွန်းသာအဖွဲ့, ကြိုးသီချင်းများ
မအားမလပ်တဲ့အတွက် သီချင်းတင်တာ နည်းနည်း ကြဲသွားပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ တောင်းဆိုသူတွေရှိလို့ အလွန်နားထောင်ကောင်းတဲ့ ကြိုးသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်တင်ပေးပါ့မယ်။
ဗိန်းဘုံဘွေ မယ်ဘွဲ့ပတ်ပျိုးလတ် October 13, 2012
Posted by myanmarclassical in ပတ်ပျိုးသီချင်းများ, ဦးထွန်းရွှေ.
Tags: ပတ်ပျိုးသီချင်းများ, မဟာဂီတ, ဦးထွန်းရွှေ
ဆိုကရေးတီးပြိုင်ပွဲဝင် သီချင်း ဗိန်းဘုံဘွေ ကို message နဲ့တစ်မျိုး mail နဲ့တစ်သွယ် ကျွန်တော့်ဆီတောင်းဆိုကြပါတယ်။ minus error ပြပြီး တင်လို့မရဖြစ်နေလို့ နည်းနည်းကြာသွားတယ် မိတ်ဆွေများ——-ခွင့်လွတ်ပေးကြပါ။
ရေမီးထိန်လျက် October 3, 2012
Posted by myanmarclassical in ယိုးဒယားသီချင်းများ, ဌေးဌေးဝင်း.
Tags: မဟာဂီတ, ယိုးဒယားသီချင်းများ, အချုပ်တန်းဆရာဖေ, ဌေးဌေးဝင်း
သီပေါမင်း မုဒ္ဓါဘိသိက်ခံပွဲတွင် အချုပ်တန်းဆရာဖေ ဆက်သွင်းသည်။
ဖြူပြာမူယာ August 21, 2012
Posted by myanmarclassical in ပတ်ပျိုးသီချင်းများ, အဆိုတော် (မ), မြင့်မြင့်စိန်.
Tags: ပတ်ပျိုးသီချင်းများ, မဟာဂီတ, မြင့်မြင့်စိန်
သာယာဝတီဦးဝိုင်းရေးသည်ဟု နိူင်ငံတော်မူ၊ ဂီတဝိသောဓနီ၊ ဂီတသိပ္ပံတို့က ဆိုသည်။
မြဝတီမင်းကြီးရေးသည်ဟု ရွှေနန်းထွက်နှင့်မဟာဂီတပေါင်းချုပ်တို့က ဆိုသည်။
သိဒ္ဓတ်မင်းတောထွက်ခန်း ယိုးဒယား August 14, 2012
Posted by myanmarclassical in တင်တင်မြ, ယိုးဒယားသီချင်းများ, အဆိုတော် (မ).
Tags: တင်တင်မြ, မဟာဂီတ, ယိုးဒယားသီချင်းများ
တေးရေး – အမည်မသိ
တေးဆို – တင်တင်မြ
အတီး – စန္ဒယားဂီတလုလင်မောင်ကိုကို
အမင်းမင်းခရ သီချင်းခန့် August 10, 2012
Posted by myanmarclassical in ရီရီသန့်, သီချင်းခန့်များ, အဆိုတော် (မ).
Tags: ရီရီသန့်အင်းလေးဦးမြင့်မောင်, သီချင်းခန့်များ
တီး- စောင်းအင်းလေး ဦးမြင့်မောင်
ပြည်ပြည်မင်းပေါင်း သီချင်းခန့် August 10, 2012
Tags: ရီရီသန့်, သီချင်းခန့်များ, အင်းလေးဦးမြင့်မောင်
ရေး – ဇေယပတေ့အမတ်
တီး – စောင်းအင်းလေးဦးမြင့်မောင်
မှိုင်းမှိုင်းမြ သီချင်းခန့် August 10, 2012
ရေး – ရှင်ဝရ
ထက်မိုးသူဇာကက သီချင်းခန့် August 10, 2012
ဆို – ရီရီသန့်
ရွှန်းရွှန်းမြ သီချင်းခန့် August 10, 2012
ဆို _ ရီရီသန့်
ဘုန်းမိုးသွန်းလောင်း သီချင်းခန့် August 10, 2012
ရေး – ငယ်တိုးအတွင်းဝန်
ကမ္ဘာတည်ပျက် July 9, 2012
Posted by myanmarclassical in မာမာအေး, ယိုးဒယားသီချင်းများ, Uncategorized.
Tags: မာမာအေး, ယိုးဒယားသီချင်းများ
ဇာတိအာဏာ (ပတ်စာပိုးတီးသွား ယိုးဒယားကြီး)
တေးရေး – ကျိုက်လတ်ဦးပြုံးချို
တောင်ကမ်းပါးယံ မြိုင်ထ June 12, 2012
Posted by myanmarclassical in အခြား, ၀ဏ္ဏကျော်ထင် ဒေါ်အောင်ကြည်, Uncategorized.
Tags: ဆိုင်း ဦးဘမောင်, အလင်္ကာကျော်စွာ ဦးဘမောင်, ဒေါ်အောင်ကြည်, ၀ဏ္ဏကျော်ထင် ဒေါ်အောင်ကြည်, မြိုင်ထ
တစ်ခါက ကျွန်တော့်ဆရာမကြီး ပြောဘူးတယ်။ အမေဒေါ်စောမြအေးကြည်၊ အမေဒေါ်အောင်ကြည်။ ဘဘ စောင်းဦးဘသန်း၊ ဘဘ ဆိုင်းဦးဘမောင် တို့ မြန်မာ့အသံမှာ သီချင်းကြီးတွေ ဓါတ်ပြားသွင်းဘူးတယ်။ တခြားပညာရှင်တွေလဲပါတယ်။ သူကတော့ ငယ်သေးတော့ အနားမှာ နားထောင် ပညာယူခွင့်ရခဲ့တယ် လို့ပြောဘူးတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ အဲ့ဒီဓါတ်ပြားသီချင်းတွေ ရနိူင်ဦးမလားဆိုပြီး အနံ့ခံ လိုက်တော့တာပဲ။ ကာလရှည် ဇွဲနပဲနဲ့ လိုက်ရှာပြီး ကံကောင်းထောက်မစွာ သီချင်းအချို့ကို ရရှိခဲ့တယ်။ ၄ ပုဒ် ၅ ပုဒ် လောက် ရခဲ့တယ်။ ထီပေါက်တာထက်တောင် ပိုဝမ်းသာသေးတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ရထားတာကြာပါပြီ။ (more…)
လေပြေဆော်သွင်းမြူး (မူဟန်သွယ်သွယ်) May 25, 2012
Posted by myanmarclassical in ထား, ယိုးဒယားသီချင်းများ, ရီရီသန့်, ဝင်းဦး.
Tags: စိန်ဗိုတင့်, ထား, ရီရီသန့်, ဝင်းဦး, အလင်္ကာကျော်စွာ စောင်းဦးဘသန်း
မြဝတီမင်းကြီး ရေးတဲ့ မြင်းတက်ယိုးဒယားလေးပါ။ မူဟန်သွယ်သွယ်လေး တင်ပေးထားပါတယ်။ ကွဲပြားသော ဆိုဟန်တီးဟန် များကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နားဆင်ခံစားကြည့်ပါ။
ကုန်းဘောင်ပရမေ May 13, 2012
Posted by myanmarclassical in ပတ်ပျိုးသီချင်းများ, မြင့်မြင့်စိန်.
မြဝတီမင်းကြီးရဲ့ ပတ်ပျိုးကြီးလေးပုဒ်ထဲကတစ်ပုဒ်ပါ။ အဲ့ဒီပတ်ပျိုးလေးပုဒ် က ၁။ ဘုံပျံနေနန်း ၂။ ကုန်းဘောင်ပရမေ ၃။ အထူးထူးငယ်နှင့် ၄။ မှိုင်ပြာမှုန်ဝေ တို့ပါ။ မဟာဂီတရဲ့ အရှည်ဆုံး ပတ်ပျိုးတွေထဲကတစ်ပုဒ်ပေါ့။ ရှားပါးသီချင်းလေးပါ။ နားမယဉ်သူများ အတွက်တော့ ပျင်းစရာ ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပေမယ့် တန်ဖိုးနားလည်သူတွေအတွက်တော့ ရွှေပါပဲ။ ဒီသီချင်းကြီးထဲမှာ ပတ်ပျိုးသံ၊ လောကနတ်သံ၊ ပဉ္စရူပသံ၊ ရတု၊ သဖြန်စသည်ဖြင့် အသံစုံပါပါတယ်။ ကုန်းဘောင်ခေတ် သာယာဝတီမင်းလက်ထက်မှာ မြဝတီမင်းကြီး အကျဉ်းကျခံနေရစဉ် စပ်ဆိုခဲ့တာဖြင့်ပါတယ်။
အိမ်ရှေ့မင်းနှင့်လှိုင်ထိပ်ထား May 4, 2012
Posted by myanmarclassical in ကိုမင်းနောင်, ထား, ဘောလယ်သီချင်းများ.
Tags: ကိုမင်းနောင်, ထား, အလင်္ကာကျော်စွာ စောင်းဦးဘသန်း, ဘောလယ်သီချင်းများ
ဒီတခါ ထူးထူးခြားခြား သီချင်းတစ်ပုဒ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နာဂဆဒ္ဒန် နဲ့ ဖူးပွေ့လက်တင် ဘောလယ် ၂ပုဒ် နဲ့ စက်လဲပျော်ပါနိူင်ယိုးဒယားသီချင်းတွေကို ပဒေသာသဘော ဆိုထားတာပေါ့။ အဆိုတော်ကြီး ဦးမင်းနောင်နဲ့ ဒေါ်ထား တို့ကသီဆိုထားပြီး အလင်္ကာကျော်စွာ စောင်းဦးဘသန်းက စောင်းနဲ့တီးပေးထားတယ်။
မြမန်းဂီရိ (မူဟန်သွယ်သွယ်) April 26, 2012
Posted by myanmarclassical in ကိုကျော်ဆွေ, စန္ဒယား ဦးရည်နွယ်, ယိုးဒယားသီချင်းများ, ရီရီသန့်, သုမောင်, မြန်မာပြည်သိန်းတန်.
Tags: ကိုကျော်ဆွေ, စန္ဒယားဦးရည်နွယ်, ရီရီသန့်, သုမောင်, မြန်မာပြည်သိန်းတန်
ဒီတစ်ခေါက်တော့ လွယ်လွယ်ကူကူ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ယိုးဒယားသီချင်းလေး တစ်ပုဒ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မြမန်းဂီရိယိုးဒယား သီချင်းကလေးက မဟာဂီတကျမ်းဝင် လူကြိုက်များတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ အတီးအဆို အလွန်များပါတယ်။ မူဟန်သွယ်သွယ်နားဆင်ရအောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
ရပ်ကြီးသူတို့ April 20, 2012
Posted by myanmarclassical in ယိုးဒယားသီချင်းများ, အဆိုတော် (ကျား), ဦးသိန်းကြွယ်.
ရပ်ကြီးသူတို့ ယိုးဒယားသံဆန်းကို တောင်းဆိုထားကြလို့ တင်ချင်နေတာကြာပါပြီ။ ကျွန်တော် မူဟန်သွယ်သွယ် တင်ချင်လို့ သီချင်းလိုက်စုတာ အဆင်မပြေဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နစ်ကျော်လောက်က ဝင်းဦးဆိုထားတဲ့ ရပ်ကြီးသူတို့ သီချင်းကိုနားထောင်ဘူးတယ်။ အဲ့ဒီသီချင်းကိုတင်ပေးချင်လို့ အခုလိုက်ရှာတာဘယ်မှာမှမရတော့ဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် အခုမိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ထပ်ပြီးတောင်းဆိုလို့ ရှိတဲ့ ဦးသိန်းကြွယ်ရဲ့ ရပ်ကြီးသူတို့သီချင်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆိုင်းအတီးကတော့ဘယ်သူ့လက်သံလဲ မသိပါဘူး။
တာသစ်ကယ်လေကူး April 15, 2012
မင်္ဂလာပါ။ နှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်မှာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ။ မြဝတီမင်းကြီး ရေးစပ်ခဲ့တဲ့ တန်ခူးလရာသီဘွဲ့ ပတ်ပျိုးလေး တစ်ပုဒ်ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ တန်ခူးလ သင်္ကြန်အခါလေးနဲ့ ကိုက်ညီတာပေါ့။ (more…)
လေးထွေသံကပ် နှင့် မြင်းခင်း April 8, 2012